Aqalka Sare oo maanta diyaarinaya ajandaha kulankiisa 13-aad – Kalfadhi
Aqalka Sare oo maanta diyaarinaya ajandaha kulankiisa 13-aad
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayaa hadda kulan ku leh Xarunta Golaha ee magaalada Muqdiaho. Waxay ka hadlayaan arrin ku saabsaan Nidaamka Federaalka iyo sida uu Aqalku uga fekeri lahaa nuuca federaal ee ku haboon Soomaaliya.
“Waxaa haatan socda kulanka (Guddiga Joogtada) Golaha Aqalka Sare, ajandaha looga hadlayana waa: dhagaysiga daraasaad ku saabsan Nidaamka Federaalka ee dalalka kala duwan ee caalamka” ayaa goor dhaw lagu soo qoray barta Feysbuugga ee Golaha.
Kulankaas waxaa sidoo kale looga hadlayaa sidii uu Aqalka Sare door uga qaadan lahaa ilaalinta iyo matalaad siinta Dowlad Goboleedyada dalka. Hase ahaatee waxaa, sidoo kale, kulanka looga hadlay diyaarinta hindisaha uu Goluhu uga shaqeyn doono kulankiisa 13-aad ee soo socda.
Golaha Aqalka Sare ayaa kulan uu yeesho waxaa ugu dambeysay laba todobaad ka hor, inta badanna lama oga jadwal rasmiya oo uu leeyahay oo lagu xisaabiyo kulamadiisa, sida Golaha Shacabka oo kulma Sabti, Isniin iyo Arbaco.
Xildhibaan sheegay iney Guddoonka Golaha Shacabku wali isku mari la'yihiin arrinta Guddiga Maaliyadda